Welcome to Aayaha Nolosha » 91-SANO JIR JAAMACAD KA QALIN JEBISAY
91-SANO JIR JAAMACAD KA QALIN JEBISAY
March 27, 2019 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Haweenay da ah oo jirta 91-sano ayaa dhameysatay Jaamacadda heerka koowaad, kadib 10 sano oo ay dadaal dheer ku bixisay waxbarashada Jaamacadda.
Haweenaydan oo u dhalatay dalka Thailand ee jirta 91-sano ayaa lagu magacaabaa Kilman Jinakul, waxayna tiri markii ay shahaaddada qaadanaysay “Wakhti kaama tegayo si aad u wax u barato”.
Kilman Jinakul waxa ay sheegtay in mar waliba ay ku adkaysanaysay in ay aaddo jaamacadda, laakiinse intii ay dhalinyarada ahayd uma helin jaanis ay ku aaddo.
Muddo dheer kadib markii ay aragtay caruurteedii oo dhammeeyay jaamacadaha ayay go’aansatay in ay ka dhabayso hammigeedii, ugu danbayna Arbacadii lasoo dhaafay ayay qalin jebisay.
Haweenaydan ayaa ka soo jeeda gobolka Lampang oo ku yaalla Waqooyiga Thailand, waxayna ku biirtay mid ka mid ah iskuulada ugu tayada fiican ee gobolkaas ku yaala, dedaal badan kadibna Jaamacadda ayay ku biirtay.
Markii ay dhalinyarada ahayd in ay aado Jaamacadda, ma ahayn wax sahlan, waayo ehelkeeda ayaa u wareegay magaalaada Bankok, halkaas ayayna ku guursatay iyadoo da’ yar, waxaana halkaa ku burburay rajadeedii ahayd in ay mar uun jaamacad aaddo.
Afar ka mid ah Shanteeda ciyaala ayaa qaatay heerka labaad ee Jaamacadda ‘Masters’, mid ka mid ahna waxa uu doonayaan in uu Maraykanka ka qaato shahaaddada PHD-da.
Waxbarashada carruurteedu ay helaan ayaa haweenaydan mar kale ku dhiiri geliyay in ay jaamacad aadco.
Mid ka mid ah carruurteeda oo ka shaqaysa Isbitaal ayaa iyana markii dambe go’aansatay in ay shaqo u raadsato dalalka dibadda.
72 sano ayay jirtay markii ay bilawday jaamacadda, laakiinse geerida mid ka mid ah gabdheheeda ayaa ku khasbay in ay dhowr sano waxbarashadeeda joojiso.
Markii ay jirtay 85 sano ayay mar kale dib ugu laabatay Jaamacadda, waxayna baratay deegaanka iyo dadka, waxayna ku tilmaamtay in aqoontu ay ka saacidayso in ay si fiican oo farxad leh u noolaato.
“Kadib markii aan ka soo kabtay geeridii iyo muragadii, waxaan naftayda ku khasbay in ay jaamacadda dhamayso, waxaan rajaynayaa in gabadhaydu ay arrintan ku farxi doonto”, ayay tiri haweenaydan oo aad u faraxsanayd markii ay shahaadda qaadanaysay.
10 sano ayay ku qaadaty Kilman in ay jaamacadda ku dhamayso
“Ma aha wakhti dambe, maskaxdaydu weligeed way soo jeeday wayna firfircoonayd si ay wax u barato,” ayay tiri Kilman.
“Adduunkan ma istaagayo, weligeed waxaa jiraya caqabado ay tahay inaan xallino, haddii aanu jirin micne, horumarka adduunku waa istaagayaa” ayay tiri.
“Waa go’aan iyo hiigsi waxa halkaas i gaarsiiyay, waxaana ku faraxsanahay inaan naftayda u sheego inaan hal qayb dhammeeyay, awoodda intaan samayn karo ayaan dadaalaa, waxaana hoosta ka xarriiqaa dhammaan qodobada aan u baahanahay si aan u xasuusto, waana waxa i saaciday muddadii aan waxbarashada ku dhex jiray, aad baana u farxayay markaan guulaysto, waana murugoon jiray haddii aan dhaco, sidaas daraadeed waxaan mar kale samayn jiray imtixaanka si aan u guulaysto” ayay tiri iyada oo qoslaysa.
“U malayn maayo in qofna shaqo i siin doono haddii aanba shaqo raadsado” ayay ku kaftantay, iyadoo ula jeedday da’ weynideeda.
Qalin jebintii Kimlan waxaa ka qayb galay qaar kamid ah ehelkeeda, taana waxay u ahayd farxad dheeraad ah.